SOMALITALK - WARARKA SOOMAALIDA
GOLAHA AMMAANKA EE QARAMAAD MIDOOBEY OO WAR-SAXAAFADEED KA SOO SAARAY ARIMAHA SOOMAALIYA:
USA: NIN SOOMAALI AH OO LAGU XUKUMAY 17 SANO OO XABSI AH
Madaxweynaha DFKMG: Soomaaliya ma ahan Muqdisho oo Keliya
20,000 oo Ari ah oo Roobab ku dileen Wajeer:
Ambassador-ka Britain ufadhiya Qaramada Midoobey oo Sheegay in ay Golaha Ammaanka ay ka go'antahay ka Shaqaynta Midnimada Soomaaliya:
Golaha Ammaanka oo Hoggaamiyayaasha Soomaalida ugu baaqay in ammaanka Sugaan
Golaha amaanka oo muujiyey taageerada Hubkadhista Soomaaliya
UN: Press Release
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa galabta Oct 26, 2004 (1:00pm xilliga New York) yeeshay wadahadal ku saabsan arimaha Soomaaliya, waxaana halkaas laga soo saaray War-Saxaafadeed taabanaya dhinacyo badan oo la xiriira nabada Soomaaliya, sugidda ammaanka Soomaaliya, dib u dhiska dalka, dib u heshiisiinta, dawlada cusub ee Soomaaliya, magcaabida ra'iisul wasaare iyo wasiiro karti leh.
Madaxweynaha Golaha Ammaanka, ahna Safiirka British u fadhiya UN-ta, Sir Emyr Jones Parry: “The Security Council reiterates its commitment to a comprehensive and lasting settlement of the situation in Somalia, and its respect for the sovereignty, territorial integrity, political independence and unity of Somalia, consistent with the purposes and principles of the Charter of the United Nations. More... [Oct 26, 2004]
War-saxaafadeedka waxaa golaha ammaanka ka akhriyey madaxweynaha golaha ee bishan, Emyr Jones Parry, oo ah ambasadoorka Britain u fadhiya UN (British Ambassador to the United Nations), waxana uu yiri "Golaha ammaanku waxa uu mar-labaad ku celinayaa sida ay uga go'antahay ka shaqaynta dejinta xaalada Somaaliya iyo qadarinta xornimada, isku-xirnaanta dhulka, madaxbanaanida siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya, taas oo waafaqsan ujeedada iyo dhidibada asaaska u ah xeerka qaramada mideebey ee loo yaqaan [Charter of the United Nations]".
Warsaxaafadeedka oo aad u dheeraa waxa uu ammaanay shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee Nairobi, shirkaas oo lagu doortay baarlamaanka Federaalka ee kumeelgaarka ah, guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Qoraalka Golaha ammaanku waxa uu hoosta ka xarriiqay muhiimada ay leedahay tallaabooyinka ilaa hadda horay loo qaaday, waxana uu ku adkeeyey sida uu golaha ammaanku u rajaynayo in dawlada Federaalka kumeelgaarka ay tagto Soomaaliya, taas oo leh karti ay ku bilaabi karto dib u heshiisiin iyo dib u dhis ku salaysan wada xaajood ay u dhanyihiin dhammaan qaybaha Soomaalidu.
Golaha ammaanku waxa uu ku dhiirigelinayaa baarlamaanka Federaalka KMG iyo madaxweynu in ay tallaabo hore u qaadaan, taas oo ah magcaabida Ra'iisul wasaaraha iyo dhismaha wasiiro karti iyo wax-qabad leh oo wax goyn kara iyo in la dejiyo barnaamij hor-dhac ah oo muujiyanay ficilada loo baahan yahay in hore loo qaado iyo jadwalka mudada kumeel gaarka ah. Waxana golaha ammaanku ku dhiiri gelinayaa xukuumada Federaalka ee KMG in ay dumarka ka qayb geliso dib-heshiisiinta iyo dib u dhiska (dagaaladii ka dib). Waxa kale oo Golaha ammaanku u muuqata wada shaqaynta suurta galka ah ee waqtigan xaadirka ah socota ee u dhaxaysa Dawlada Federaalka ee KMG iyo bulshada caalamka.
Golaha ammaanku waxa uu ku amaanayaa wadamada ku jira IGAD, gaar ahaan Kenya, iyo wadamada kaleba sidii ay isugu soo dubarideen shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliya labadii sano ee la soo dhaafay, waxana golohu wadamadaas ku dhiiri gelinayaa in ay sii wadaan isku daygooda taageerada nabadda Soomaaliya.
Golaha ammaanku waxa uu taageerayaa Ururka Afrikaanka ballaanqaadkiisa ah in uu caawino Soomaaliya, gaar ahaan qorshaynta nabad kusoo celinta Soomaaliya [Peace Support Mission to Somalia] taas oo ay ku jirto hub-kadhista iyo xasilinta, waxana (goluhu) ku dhiiri gelinayaa wadamada deeqda bixiya in ay arintaas ka qayb qaataan.
BAAFIN: ABDIKARIN HUSSIN MIIRE
Anigoo ah Faadumo Ahamed Mahamud oo ku nool dalka USA waxa aan halkan ka baafinay wiil aan walaalo nahay oo markii iigu
danbaysay jogay magalada Nairobi, ee kenya haatana waxan ku maqlay kampala dalka uganda, waxa la yiirahda ABDIKARIN HUSSIN MIIRE, hadda ma ogi meesha uu ku suganyahay, ee fadlan qof kasta oo war iyo wacaal u haya fadlan akhbaartiisa ha iigu soo hagaajiyo: ramla2001@hotmail.com
Golaha ammaanku waxa uu soo dhoweeyay xafiiska qaraamada midoobey ee siyaasada ee Soomaaliya, hay'ada SACB [Somalia Aid Coordination Body], Wadamada Yurub (EU), wadamada IGAD, wadamada carabta iyo wadamada kaleba oo ku hawlan qaabka dib-udhiska, kaas oo gogol-dhig u ah hab dhaqaale ahaan lagu taageerayo Soomaaliya, iyo sidii looga qayb qaadan lahaa dib-udhiska iyo dhirgelinta barnaamijyo kobcinaya dhaqaalaha marka ay nabadu kusoo laabato Soomaaliya.
Golaha ammaanku waxa uu la qabaa fikradii xoghayaha guud ee qaramada midoobey. isla mar ahaantaasna horumarinta ka qayb qaadashada qaramada midoobey ee Soomaaliya waxaa shardi ah in ay ay ahaato mid kordheysa, taas oo lagu salayn doono waxa ka soo baxa wadahadala lala yeesho dawlada cusub. Golaha amaankuna waxa uu si niyad sami ah ku sugayaa soo jeedinada xoghayaha guud ee qaramada midoobey ee arintan la xiriirta.
Golaha ammaanku waxa uu ugu baaqayayaa hogaamiyayaasha Soomaaliya in ay jawi wanaagsan u abuuraan dawlada Federaalka KMG, taas oo ah in ay hir geliyaan ama sugaan amaanka.
Dhanka kale Qoraalka kusoo baxay shabakada Qaramada midoobey ayaa xusay in xoghaya guud ee qaramada midoobey, Koffi Annan, ain uu ku baaqay in Soomaaliya ay u baahantahay mucaawino dheeraad ah. Waxana qoraalku xusay in mucaawinadaas looga baahan yahay dib-dhiska nabada, taas oo la xusay in khasnadda qaramada midoobey ee dib-dhiska nabada Soomaaliya ay hore lacag ugu deeqeen Ireland ($34,668.65), Italy ($536,150), iyo Norway ($836,533.39), Waxa kale oo xoghaya guud ee qaramada midoobey uu ku faraxsanyahay in dawlada Talyaanigu ay mucaawinadii hore ku sii dartay lacag kale oo ah $2,239,200.
Abdishakur Muhidin Hassan oo aabihiis iyo labo walaaladiis ah lagu diley dalkiisii Soomaaliya, ayaa isniintii Xabsiga loo taxaabay, kaddib markii lagu soo oogey dembi ah in uu nin ku diley magaalada Roanoke (Virginia, USA), sidaas waxaa maanta qoray wargeyska magaaladaas ee lagu magcaabo Roanoke.
Qareenka magaciisu yahay Judge Charlie Dorsey ayaa Abdishakur Muhidin Hassan ku xakumay 17 sano iyo Afar-bilood oo xabsi ah. Abdishakur oo 23-jir ah waxaa lagu soo oogey in uu geystey dil. Waxaana jariidadu xustay in Abdishakur Muhidin Hassan uu bishii Agoosto qirtay in uu diley Frederick "Ricky" Mumford, qirashada derejada labaad ee loo yaqaan "second-degree murder", waxaana, sida ay jariidadu sheegtay, Frederick wajiga laga toogtey xilli habeen ah oo taariikhdu ahayd Febraayo 3deedii.
Abdishakur hooyadiis oo magaceeda la yiraahdo Habibo Masame Ali [waa sida wargeysku u qoraye] oo isniintii ka hadashay maxkamada qareenka hortiisa waxa ay sheegtay in Abdishakur oo wiil yar ah markii ay dagaalada qabiilku bilaabmeen in la diley aabihiis, laba wiil oo walaalihiis ah iyo ayeeyadiis sannadkii 1991. Intii qoyska ka soo hartay waxay qaxootinimo ku aadeen kenya, kaddina maraykanka, magaalada Roanoke, halkaas oo Abdishakur uu ka helay shaqo.
Ninka dhintay walaalkiis oo magaciisu yahay Paul Mumford oo asaguna maxkamada ka hadlay waxa uu sheegay in ay ahayd in Abdishakur lagu xakumo xabsi intaas ka badan, taas oo uu sheegay in lagu mudacayey xabsi aan ka badnayn 28 sano, laakiin hadda lagu xakumay 17 sano.
Madaxweynaha DFKMG, C/laahi Yuusuf oo ay soo xiganeey warbaahinta caalamku ayaa waxa uu yiri "Haddii arintu tahay dawladu ha tagto Soomaaliya kadib marka la sugo ammaanka Muqdisho, arintaas uma aragno habka saxda ah", waxa kale oo uu yiri " Soomaaliya ma ahan Muqdisho oo keliya. Soomaaliya waxay leedahay magaalooyin kale oo badan. Waxa ay dawladu u baahan tahay in ay tagto gudaha (Soomaaliya) oo bilowdo shaqo".
Hadalkaas waxa uu MFDKMG yiri mar uu isniintii ka hadlayey hadal uu Koffi annan hore u yiri oo ahaa in qaramada midoobey ay mucaawinadeeda Soomaaliya ay noqoto mid tartiib-tartiib ah, arintaas oo uu C/laahi Yuusuf ku gacan sayray.
Waxa kale oo MFKMG uu xusay in dalku sannad gudihiis u baahan yahay 30,000 oo cidan hubsaysan ah oo korka kala socda ammanka. [Bilowgii safarka uu waftiga madaxweynuhu ku tegey Itoobiya ayuu MDFKMG waxa uu AU weydiistey 20,000 oo ciidan nabad ilaalin ah, ksi ay hubka uga dhigaan malaysiyada hubaysan].
Wararka ka imanaya Wajeer ayaa tibaaxay in qiyaastii 20,000 oo isugu jira Riyo iyo Ido ay ku dhinteen aagaas, kaddib markii halkaas ay ka da'een roobkii ugu lixaadka badnaa muddo laba sanadood ah.
Waxaa kale oo wararku intaas ku dareen in cudur ku dhaca geelo oo loo yaqaan "camel pox" uu woqooyiga Wajeer ku diley 30,000 oo geel ah.
Faafin: SomaliTalk.com | Oct 26, 2004
Sawirada: Google Search
OLOLAHA DOORASHADA USA OO CIRKA ISKU SHAREERAY
»Doorashada Maraykanka oo gashay toddobaadkii ugu dambeeyay...
»Muslimiinta Maraykanku musharaxee codkooda siin doonaan Guji...
»SAMSAM AXMED DUCAALE vs HARGEYSA